Linkardipa - Entertainment Website
မန္တလေး စက်သုံးဆီပန့် အရောင်းဆိုင်များ ရောင်းစရာ ဆီမရှိသဖြင့် ပိတ်ပစ်ရမည့် အခြေဆိုက်နေ…
June 29, 2022 Linkardipa 0
စက်သုံးဆီတင်သွင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက လက်လီအရောင်းဆိုင်တွေကို အလျင်မှီအောင် ပြန်လည်ရောင်းချပေးနိုင်မှုမရှိလို့ ဆိုင်တွေ ပိတ်ရတော့မယ့် အခြေအနေ ဖြစ်နေပြီလို့ မန္တလေးအခြေစိုက် အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စက်သုံးဆီ ပန့်အရောင်းဆိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ လက်ရှိ မန္တလေး စက်သုံးဆီ ပန့်အရောင်းဆိုင်တွေမှာ ဓာတ်ဆီ ၉၅ အမျိုးအစားက ရောင်းစရာ မရှိတော့သလို ဓာတ်ဆီ ၉၂ နဲ့ ဒီဇယ်လည်း ပြတ်သလောက် ရှိနေပြီလို့ စက်သုံးဆီပန့် အရောင်းဆိုင် အရောင်းဆိုင်တွေထံက သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတဝန်းရှိ […]
မြို့ပြမှာ ပွဲကဖို့ ဆိုင်းသံလေး ပေးလိုက်ကြရအောင် လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို
မြို့ပြမှာ ပွဲကဖို့ ဆိုင်းသံလေး ပေးလိုက်ကြရအောင် လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို မကြာမီ လာမည်နော် မြို့ပြတော်လှန်ရေးအရှိန်မြှင့်တင်ဖို့ Fundraising Program ဖြစ်တဲ့ Project NAN HTIKE AUNG လာပါတော့မယ်။ July 1 ရက်နေ့ကနေ စတင်မှာ ဖြစ်ပြီး မြို့ပြကို ကောင်းကောင်းဝိုင်းတွန်းနိုင်မယ်ဆိုရင် တော်လှန်ရေးအတွက် ရလဒ်ကြီးကြီးတွေ ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြမှာ ထိခိုက်ရှနာတွေဖြစ်ရင် နာကြင်ကြေကွဲကြရသူတွေအတွက် မြို့ပြအတွက် တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့နိုင်မယ့်အပြင် စစ်ခွေးတွေကို […]
၄ တန်းကျောင်းသူဘဝကထဲက စင်ကာပူမှာကျောင်းဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာပါ ဆက်တက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဦးထွန်းလွင်ရဲ့ သမီးလေး
မိုးနတ်မင်းကြီးရဲ့ သမီးလေး ၄ တန်းကျောင်းသူဘဝကထဲက စင်ကာပူမှာကျောင်းဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာပါ ဆက်တက်ခွင့်ရခဲ့ ဒီလောက်စွမ်းရည်ရှိတဲ့ မြန်မာသမီးငယ်လေး တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရ သိရတာ နိုင်ငံအတွက် အားရှိလိုက်တာ ဒီလိုစွမ်းရည်ရှိတဲ့ သားငယ် သမီးငယ်တွေ အများကြီးပေါ်ထွန်းပါစေ… အဲဒီစွမ်းရည်ရှိတဲ့ သမီးငယ်လေးနံမည်က “စွမ်းရည်“တဲ့ မြန်မာပြည်က ၄ တန်းကျောင်းသူ “စွမ်း”…. စင်္ကာပူကို မိခင်နဲ့အတူ လာလည်ရင်း …. ခဏတည်းတဲ့အိမ်က အိမ်ရှင်ကလေးလေးတွေနေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက အစိုးရကျောင်းမှာ primary(4) ( Grade […]
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် (၁) လစာ ဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် … ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွက် (၁) လစာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း) မိုးစက်မိုးပေါက်များကြားမှ အရာအားလုံးသည် စိမ်းလန်းစိုပြေနေပြီး ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ရာကောင်းလှသော မိုးဦးကာလ ဇွန်လ၏နေ့ရက်များ ဆရာ မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း ) ၏ […]
ကျိုက်ကလော့ဘုရားပေါ်က ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်နဲ့ ဘုရင့်နောင်မင်းရဲ့မိဖုရား ယိုးဒယားမင်းသမီး တို့အကြောင်း
ရန်ကုန်ပြည်လမ်း မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ပေါက်ကုန်းရပ်ကွက်(ဝါယာလက်ဈေး)အနီးရှိ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ကျိုက်ကလော့စေတီတော်မြတ်ကြီးကို အိမ်နဲ့နီးသော်လည်း သိပ်မရောက်ဖြစ်ပါ။ အခါကြီးရက်ကြီးလောက်သာ ရောက်ရှိဖူးမျှော်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ရက်များတွင် ပျားပန်းခတ်မျှလူစည်ကားသလို အထူးသဖြင့် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ရုပ်ရှင်လောကမင်းသမီးအများစုက ဒီဘုရားမှာဆွမ်းကပ်ခြင်း အလှူ ဒါနပြုခြင်း အများပြည်သူဘုရားဖူးလာသူများကို ပံ့သကူဝတ္တု ပစ္စည်းပေးဝေလှူဒါန်းခြင်းများကိုအခါကြီးရက်ကြီးများတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ ဒီနေ့တော့ ကြားရက်ဖြစ်သဖြင့် ဘုရားပေါ်တွင်လူသူရှင်းနေပါတယ်။ ဘုရားတစ်ပါတ်လှည့်သောအခါ ကျနော် အရင်ကမြင်နေကျမဟုတ်သော နတ်နန်းတစ်ခုက အမည်ပြောင်းလဲနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ထိုနတ်နန်းမူလအမည်မှာ”ယိုးဒယားမင်းသမီး အမျိုးရုံမိဖုရားနတ်နန်း” ပါယခုပြောင်းလဲထားသောအမည်က ”ယိုးဒယားမင်းသမီး ဆုပန်ကလျာ နတ်နန်း” တဲ့ […]
အခုတစ်လော ထိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဂဏန်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ ထူးဆန်း တဲ့ရွှေညောင်ပင်မှ တတိယအကြိမ် အထင်ရှားပေးပြန်ပြီ…
အခုတစ်လော ထိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဂဏန်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ ထူးဆန်း တဲ့ရွှေညောင်ပင်မှ တတိယအကြိမ် အထင်ရှားပေးပြန်ပြီ… အခုတစ်လော ထိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ 2D 3D ပေးတယ်ဆိုတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ရွှေညောင်ပင်မှ တတိယအကြိမ် သိန်း၁ဝဝတန် ဒိုင်ပြေးနံပတ် အထင်ရှားပေးပြန်ပြီ။ ထူးဆန်းတဲ့ ရွှေညောင်ပင်မှ ၃ ကြိမ်မြောက် ဂဏန်းများပေးနေထိုင်းနိုင်ငံက ထူးဆန်းတဲ့ရွှေညောင်ပင်မှ တတိယအကြိမ် ချဲဂဏန်း ၃ လုံး ၊ ၂ လုံး ကိုအထင်အရှားပေးသည်ဟုဆိုကာ လူအများ လာရောက် […]
မင်းအောင်လှိုင်လက်ထက် ဖွင့်ထားတဲ့ ကျာင်းမှာ ကျောင်းသားချင်း အနိုင်ကျင့်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ပျံ့နှံ့
မင်းအောင်လှိုင်လက်ထက် ဖွင့်ထားတဲ့ ကျာင်းမှာ ကျောင်းသားချင်း အနိုင်ကျင့်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ပျံ့နှံ့ ( လူကို လူလို့မမြင်တော့ အကုန်မင်းမဲ့စရိုက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ ) စာသင်ကျောင်းထဲက ပျောက်သွားတဲ့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု (သို့မဟုတ်) စစ်ကျွန်ပညာရေး အသက်ဝင်နေပြီလား မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော် တောင်ကြီးမြို့က စာသင်ကျောင်းတွေကို ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က စပြီး ဖွင့်တာ အခုဆိုရင် ကျောင်းဖွင့်ရက်က တစ်လနီးပါး။ ကျောင်းပြန်တက်တဲ့ ကလေး များသလို၊ ကျောင်း […]
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လိုအပ်နေသည့် စက်သုံးဆီ ဝယ်ယူတင်သွင်းရာတွင် ဆိုင်းငံ့ငွေပေးချေမှု စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းနိုင်မည့် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် စကစ လက်အောက်ခံ စီးပွားကူးသန်း ဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ စကစ လက်အောက်ခံ စီးပွားကူးသန်း ဝန်ကြီးဌာန စက်သုံးဆီတင်သွင်းသိုလှောင် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ဇွန်လ (၂၄) ရက် ရက်စွဲဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ စက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချ ဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းထံ အကြောင်း ကြားစာ‌ပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ “တကယ်တော့ လတ်တလောကာလမှာ စက်သုံးဆီကို နိုင်ငံခြားသုံးငွေ […]
ဒီ၂ဝဝ ကျပ်ကို သေသေချာချာ သိမ်းထားတာ ၆ နှစ်ကျော်ပါပြီ
ဒီ၂ဝဝ ကျပ်ကို သေသေချာချာ သိမ်းထားတာ ၆ နှစ်ကျော်ပါပြီ… ကျွန်တော် အရမ်းပျင်းရိတဲ့အခါ၊ အဆင်မပြေမှု၊ အခက်ခဲတွေကြုံတဲ့ အခါမှာလည်း ဒီ ၂၀၀ ကျပ်ကို ကြည့်လိုက်ရင် ခွန်အားတွေ ပြန်ပြည့်လာတယ်လို့ အမြဲခံစားရပါတယ်။ ဒီ ၂၀၀ ကျပ်ကို တန်ခိုးရှိတဲ့ ဆရာ၊ ဘုန်းကြီးတွေ ပေးထားလို့ သိမ်းထားခြင်းလည်း မဟုတ်သလို ကျွန်တော်က အယူသီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ သိမ်းထားခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ […]
ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့မှ နောက် ၂၄နာရီအတွင်း အပူလျော့မိုးတွေ ရွာသွန်းနိုင်တဲ့ ဒေသများကို ခန့်မှန်းပေးလိုက်တဲ့ မိုးနတ်သမီးလေး စုစုစံ
မုံရွာခရိုင်ခန့်မှန်းပေးထားတဲ့အတိုင်း မိုးရွာပါတော့မယ် 28/06/2022 AT 4:57PM နောက် ၂၄နာရီအတွင်း ပြင်ဦးလွင် နောင်ချို ဂုတ်ထိပ် ကျောက်မဲ သီပေါ လားရှိုး သိန်းနီ၊ ကွတ်ခိုင် မူဆယ် နမ့်ခမ်း နမ္မတူ မိုးမိတ် မိုးကုတ်မြို့များမိုးများစွာရွာလာနိုင်ပါတယ် ISSUED TIME 28/06/2022 ထီးလင်ဖက်ကမိုးတွေက မကွေးတိုင်း ပေါက်မြို့နယ်ဖက်ကိုဆင်းလာနေပါတယ် satellite Eumetsat 28/06/2022 ဂန်ဂေါ ရေမျက်နီ ပုံညာ ကျောမြို့ ပုံတောင် မိုး⛈၊ […]